MADAGASIKARA – Antoko TIM: NY OMALY TSY MIOVA INDRAY IHANY VE ? | Tsimok'i Gasikara - Réveillons-nous!
← FRANCE – Bourdin Direct : Emmanuel Todd envoie Valls et Hollande au tapis
En Grande-Bretagne, la notion de responsabilité politique prend tout son sens (FranceTV Info) →
Hita sy re nihetsiketsika indray tato ato ny antoko politka TIM (Tiako I Madagasikara), indrindra indrindra taorian’ny nandravana ny Movansy Ravalomanana sy ny nanatsaharana ny hetsiky ny mpomba an’I Dada tetsy amin’ny Magro Behoririka.
Tsy nisy tsy nahalala fa vahoaka marobe an-tapitrisa manerana an’I Madagasikara no nisafidy ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ ny volana Desambra 2006. Io no fifidianana farany nisiana mpitondra voafidy ara-dalàna tamin’ny Repoblika faha III. Tokony samy hiaky anefa ny rehetra fa ny ankamaroan’ireo maherin’ny atsasamanilan’ny vahoaka malagasy nifidy an-dRavalomanana ireo dia tsy misy mpikambana ao anatin’ny antoko TIM avokoa. Tokony tsy adinoina anefa fa ny safidin’ireo vahoaka maro an’isa ireo no fototra hijoroan’ny antoko politika. Maro dia maro tokoa mantsy ireo antoko politika voasoratra any amin’ny Minisiteran’ny ati-tany kanefa dia vitsivitsy ihany no tena fantatry ny maro, noho izy ireo tsy mety mahazo fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana. Natanjaka ny antoko AREMA tamin’ny fotoan’androny, kanefa rehefa tojo ny fotoanany dia lefy ihany. Natanjaka indrindra ny TIM nanomboka ny taona 2002 ka hatramin’ny nialan’ny filoha Ravalomanana teo amin’ny toerany taorian’ny fanonganam-panjakana.
Antoko tena matanjaka na teo amin’ny lafiny mpikambana na teo amin’ny lafiny ara-pitaovana sy ny hoenti-manana rehetra. Ny nahagaga anefa dia toa tsy nahatohitra ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009 ity antoko izay nihanteheran’ny filoha Marc Ravalomanana ity. Hatreny Iavoloha, Ambohijatovo, Akorondrano, ary Behoririka dia saika ireo olon-tsotra sy fikambanana vao najoro tao anatin’ny tolona no tena niaro sy nitaky ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana. Taona roa farany talohan’ny nahatongavan’ity filoha mpanorina ny antoko TIM ity vao henoheno sy nampiaka-peo nilaza ho tena tompon’ny tolona ireo olona mpila ranondranony sy mpanao taty reraka tao anatin’io antoko io. Fa isany nanamarika ny tolona ihany koa ny fifandirana nisy teo amin’ireo antoko hafa nandrafitra ny Movansy Ravalomanana sy ireo izay mitonona ho TIM. Samy efa nifandiran’ny TIM avokoa ny MFM, TEZA, AMF3FM, sy ireo fikambanana samy hafa nijoro tamin’ny fampandresena ny tolona. Ankehitriny anefa dia gaga ny rehetra fa ireo olona efa hita maso fa namadika ny tolona sy ireo nanao tsobo-dranon-dramiangaly no toa mandidy sy manapaka amin’ny safidy politika hoan’ireo mpomba an-dRavalomanana.
Tsy averina tanisaina intsony ireo anaran’olona izay namadika ny tolona nandritra izay 6 taona nitakiana ny famerenanana an’Andriamatoa Marc Ravalomanana teto an-tanindrazana. Ny azo ambara tsy ampihambahambana kosa anefa dia mpikambana sy mpitarika ny antoko TIM avokoa ny 99% amin’ireo mpamadika palitao ireo. Ny tena itovizany dia efa samy nanodikodina sy nihinana ny volaben-dRavalomanana avokoa izy rehetra vao niodina nandray vola sy toerana tany amin’ny fitondrana FAT nandritra ny tetezamita.
Tsiahivina fa ny famadihana palitao dia efa nanomboka fony mbola teo amin’ny fitondrana ny filoha Marc Ravalomanana, fa indrindra, nandritra ny tolona izay naharitra 6 taona. Raha zohina dia saika io fitiavam-bola io hatrany izany no tena mahatonga ireo olona hivadika amin’ny foto-kevitra izay niarahan’ny rehetra nanao ny fitakiana tamin’ny tolona.
Tsy mamoha fota-mandry raha milaza fa tsy nandeha tamin’ny laoniny ny fikarakarana sy ny fandaminana nandritra ny tolona teny Iavoloha. Tsy honohono anefa fa zavatra tsy hiadian-kevitra ny hoe mbola nanana ny hoenti-manana io antoko io satria mbola teo amin’ny fitondrana tamin’ny fiatombohan’ny tolona ny taona 2009. Raha tsorina dia efa nanomboka tamin’izany no nisian’ny fanodikodinana vola amina miliara nataon’ireo mpitantana ny TIM isan-tsokajiny. Io toe-javatra io no nitohy rehefa tany an-tsesi-tany tatsy Afrika Atsimo. Tsy vitsy ireo izay mamorona atsanga tsy aman’orana milaza hanao hetsika ivelan’ny kianja ka ilàna fanentanana sy fitaovana mba nentina nakana volabe tany Afrika Atsimo. Ireo akanga sisa nanamboran’ny TIM tavela tao amin’ny tolona dia saika efa nahita tombontsoa tamin’io fikafika io. Nitohy tamin’ny filazana antoko miaramila vonona ny hamerina an’I Dada ny resaka taty aoriana mba hitomboan’ny sora-bola. Tsy vitsy tamin’ireo mpitarika no nahatsangana trano sy orinasa madinika tao anatin’io 6 taonan’ny fangirifirina niainan’ny Malagasy sy mbola iainany io. Rehefa tena tery ny lalàna ka nihidy ny “robinet” tatsy Afrika Atsimo dia ireo olona nitono-tena ho mpitarika ireo no nandrisika sy nanao izay tsy maintsy nidirina tao amin’ireo andrim-panjakanan’ny Tetezamita mba hahazoany karama. Tsy vitsy ireo nampiaka-peo hoe tsy fitiavan-tanin-drazana intsony no nanaovan’ireo mpanao politika ny tolona fa nokaramaina izy ireo. Tsy mbola nahatonga saina ny filoha mpanorina ny antoko TIM anefa ireo toe-javatra izay nitranga nandritra ny 5 taona mahery ireo ka nisian’ny disadisa anatin’ireo mpitolona sy ny mpitarika. Farany dia tsiahivina fa mpikambana TIM nahafatra-po sy efa nialokaloka lavitry ny tolona no nandeha nandresy lahatra ny filoha Marc Ravalomanana tatsy Afrika Atsimo mba ho kandidà tohanan’ny Movansy Ravalomanana tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ity farany izay nivarotra ny fandreseny mba hampandamoaka ny tolom-bahoaka sy nahazoany volabe. Rehefa hatao ny fandinihina dia saika mijoro amin’ny fitiavam-bola avokoa ireo mpanao politika miditra ao anaty antoko politika ankehitriny ka tsy lavitry ny TGV sy ny HVM ny TIM.
Ankoatr’ireo toe-javatra ireo dia tsara tsiahivina fa maro ireo olona izay efa namadika palitao tamin’ny mangingina no niverina nitsaitsaika tao amin’ny antoko TIM taorian’ny nahalasan’ny ekipan’I Yves Aimé. Ireo olona ireo izay nanangam-bovona sy mirehereha mandrakin’ ny ankehitriny fa tompon’ny antoko TIM sy tena nitolona. Ny tena mamohehitra dia io antokon’olona io ihany no mivarotra ny “informations” sy mifandray tendro amin’ny mpifanandrina ara-politika ka nanao ny tetik’ady rehetra nampandemena izany tolona izany, satria izy ireo mihintsy no zary lasa tompon-teny mialoha ny filoha mpanorina sy ny Movansy iray manontolo. Hazavaina fa tsy maintsy ny tenany ihany no nampody ny filoha Marc Ravalomanana teto an-tanindrazana ny taona 2014 noho io toe-javatra io.
Mbola fampahatsiahivana ihany no ilazana fa tena nahagaga ny rehetra ny nahita olona toa ireo mpanakanto sasan-tsasany lasa kandidà Depioten’ny TIM tamin’ny fotoan’androny. Tsy fanaratsiana ny mpanakanto sanatria no hilazana fa olona “Professionnels” izy ireny. Saika ny tombotsoany aloha no jereny mialoha ny hanaovany zavatra iray. Azo antoka mantsy fa tsy hanao zavatra hafa hamono ny antom-pivelomany ireo olona ireo, no sady tsy hanao zavatra hanimba ny hoaviny ho tombotsoan’ny antoko politika iray. Tsy gaga noho izany ny rehetra raha maro amin’ireo olon’ny antoko TIM no tsy re feo intsony no sady tsy hita soritra tamin’ny tolona izay natao.
Io resaka fomba fisiafidianana olona io no isany mahabe resaka eo amin’ny antoko ankehitriny. Raha ny hita mantsy hatreto dia efa nanao fahadisoana maro mihintsy ity antokon’ny filoha Marc Ravalomanana ity teo amin’ny tetik’ady sy fomba fisiafidianana olona handrafitra ny antoko sy hatolotra amin’ireo fifidianana isan-tsokajiny. Raha ireo olana maro samy hafa notsahivina teo mantsy dia saika ny tsy fananan’ny mpanao politika hazon-damosina sy ny tsy faharetan’izy ireo ary ny fitiavam-bola diso tafahoatra tao aminy avokoa no tena fototry ny olana. Mety ho misy fahalemena sy tsy fahatomombanany ihany koa eo amin’ny fitsipi-pifehezana anatiny sy ny fomba fifampitondrana ao anatin’ny antoko nefa rehefa ny olona nosafidiana mihintsy no tsy tokony ho izy dia tsy mahagaga raha mivaralila avokoa ny zavatra atony. Ankoatran’ny olana “Tiko Boys” dia ny resaka tsindry bokotra na “parachutage” no tena nahatonga ny safidy diso eo amin’ny lafiny olona omena andraikitra. Toy izay efa nisy hatramin’izay dia ireo mambran’ ny birao politika hatrany no tompon’ny teny farany eo amin’io lafiny fisafidianana olona io. Tsy zoviana amin’ny rehetra ny resaka “ecollage”; izany hoe ireo olona mahatolotolotra sy mahay maka ranondranony amin’ireo lehibe mpitarika ny antoko hatrany no tsy maintsy voasafidy ho kandidà atolotry ny TIM rehefa raikitra ny fifidianana isan-tokony. Fomba izay tena fototry ny firodanan’ny antoko sy ny filoha Marc Ravalomanana araka ny nazavaina eto. Takona sy tsy hita avokoa mantsy ireo olona tena mamim-bahoaka sy hita fa tena tokony hitarika azy, fa ireo mpanam-bola sy namanaman’ny mpitarika ny antoko no tsy maintsy mahazo vahana. Ny tokony tsy hadino anefa dia manao izay ho afany hamerenana ny volany ireny olona ireny rehefa mahazo fahefana. Ny fanapara-pahefana toy izany sy ny fanaovana tsindry hazo lena eo anivon’ny fiaraha-monina no isany antony nampisy lonilony nandoavan’ny vahoaka ity antoko matanjaka ity tamin’ny taona 2007. Tsy nahagaga raha tsy nahatohitra an-dRajoelina Rafalimanana tamin’ny fifidianana ho ben’ny tanànan’Antananarivo.
Raha ny tokony ho izy dia efa nandraisana lesona izay 13 na 14 taona nijoron’ny TIM izay, hoan’ny filoha Marc Ravalomanana. Ny zava-nitranga sy niainana tao anatin’ny 6 taonan’ny Kirizy izay dia tokony efa ampy nandinihina ny zava-misy sy nanovana ny fomba famindra. Tsy izay anefa ny zava-misy fa mbola ireo olona mpamadika sy nanao mpamosavy malemy hatrany no hitan’ny olona manodidina an’Andriamatoa Marc Ravalomanana sy manana ny fahefana no sady tompon-teny farany eo amin’ny safidy politikany ankehitriny. Mampiaka-peo ny eny Ampitatafika sy ny Avara-drano, diso fanantenana ny any Boeny, ary kivy ny ankamaroan’ireo mpitolona ankehitriny. Toa ny omaly tsy miova ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny politikan’ny mpanorina ny TIM. Hanao ahoana no mety fiantrehana ny 2018 raha izao no mitohy? Mandra-pahoviana no tsy maintsy hizaka ny vokatry ny fanao ratsin’ny mpanao politika tia tena sy mihatsaravelatsihy amin’ny kabary tsy valiana ny vahoka Malagasy? Tsy misy mpamadika palitao sy mpanao taty reraka intsony ve ao anatin’ny TIM sy manodidina an’I Dada?
Publié le 9 mai 2015, dans AFRIQUE, Françafrique, Madagasikara - Crise, Madagasikara - Histoire, Politique, et tagué ecolazy, Malagasy, Mivadika palitao, Mpamitaka, Opportunistes, Parti politique, Ravalomanana, TIM, Tolona. Bookmarquez ce permalien.	Poster un commentaire.